अरुण भ्यालीको नाफा एक करोड ३६ लाख | Notebazar
अरुण भ्यालीको नाफा एक करोड ३६ लाख
Note Bazar २८कार्तिक, २०७६, बिहीबार / Nov 14, 2019 13:30:pm
अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा गत आर्थिक वर्षको नाफाको तुलनामा ८१ हजार रुपैयाँले धेरै हो ।
कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १ करोड ३५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।
कम्पनीले आम्दानी वढेको भएपनि गत आवको तुलनामा सञ्चालन खर्च वढेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा बिद्युत बिक्रीबाट १ करोड ३० लाख रुपैयाँ कमाएको यस हाइड्रोपावरले चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिसमा २ करोड ३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
हाइड्रोपावरको अन्य स्रोतमार्फतको आम्दानी ७२ लाख रुपैयाँबाट घटेर ६ लाख रुपैयाँमा झरेको हो । हाल ९३ करोड ३० लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा ९ करोड १२ लाख रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा हाइड्रोपावरको जगेडा कोषमा ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ थियो ।
हाल कम्पनी प्रतिशेयर आम्दानी ५ रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ १०९ रुपैयाँ ७८ पैसा रहेको छ । सो अवधीमा कम्पनीको सेयरको मूल्य आम्दानी अनुपात १६.४० गुणा छ ।
सिनर्जी पावरको विद्युत बिक्री बढ्दा नाफा बढ्यो, सरकारले दिएन १२ करोड 18/11/2019
आँखुखोला हाइड्रोको ऋणात्मक जगेडाको आकार झनै बढ्यो, दशकमा पनि ऋण तिरिसक्न मुस्किल 17/11/2019
जनतासँग ५५ करोड उठाएको सान्जेन घाटामा, कहिले बाल्ला बिजुली ? 16/11/2019
भर्खरै आइपीओ बेचेको रसुवागढी घाटामा, कहिले वितरण गर्ला लाभांश ? 16/11/2019
अपर तामाकोशी अझै एक करोड ३० लाख घाटामा, कहिले होला विद्युत उत्पादन? 16/11/2019
५२ रुपैंया शेयरमूल्य रहेको युनियन हाइड्रोले कमायो ७० लाख 15/11/2019
आईपीओ बेचेको हिमालय उर्जा नोक्सानबाट नाफाको बाटोमा 14/11/2019